အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက (၅၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့ – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက (၅၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခဲ့
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့မှ ၃ ရက်နေ့အထိ စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ၊ စင်ကာပူမြို့ရှိ Singapore Expo ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် အာဆီယံ အစိုးရချင်းဆိုင်ရာ ကော်မရှင် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နျူကလီးယားလက်နက် ကင်းမဲ့ဇုန်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်အစည်းအဝေး၊ စင်ကာပူ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဗီဗီယန် ဘာလာခရစ်ရှ်နန်မှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် အလုပ်သဘော ညစာစားပွဲ၊ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများမှ စင်ကာပူနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် လီရှန်လုံးအား ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံပွဲ၊ (၅၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံနှင့် အီရန်နိုင်ငံတို့မှ အရှေ့တောင်အာရှ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား၊ အာဂျင်တီးနားသမ္မတ နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီး Jorge Faurie မှ ဂျီ-၂၀ အစည်းအဝေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများအား ရှင်းလင်းပြောကြားပွဲ၊ (၅၁)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ မျက်နှာစုံညီအစည်း အဝေးနှင့် သီးသန့် အစည်းအဝေး၊ အာဆီယံ၏ ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံများ ဖြစ်သည့် ဂျပန်၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ နယူးဇီလန်၊ အိန္ဒိယ၊ ကနေဒါ၊ ကိုရီးယားသမ္မတ နိုင်ငံ၊ အီးယူ၊ သြစတြေးလျနှင့် အမေရိကန်တို့နှင့် ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးများနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမှ တည်ခင်းဧည့်ခံသည့် ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲတို့သို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးများနှင့် တစ်ဆက်စပ်တည်း ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၉)ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂင်္ဂါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၈) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး၊ (၁၁) ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်မြစ်အောက်ပိုင်းနိုင်ငံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးနှင့် (၁၁)ကြိမ်မြောက် မဲခေါင်-ဂျပန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတို့သို့လည်း ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးသည် မလေးရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၊ တီမောလက်စ်တေ ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးတို့နှင့် သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် သြဂုတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဆက်လက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အပေါင်းသုံး နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်း အဝေး၊ (၈) ကြိမ်မြောက် အရှေ့အာရှထိပ်သီး အစည်းအဝေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး များ အစည်းအဝေးနှင့် (၂၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံဒေသဆိုင်ရာဖိုရမ်၏ သီးသန့် အစည်းအဝေးနှင့် မျက်နှာစုံညီ အစည်းအဝေးများသို့ ဆက်လက် တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အလားတူ သြစတြေးလျ ဓနသဟာယနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး The Hon. Julie Bishop MP ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး The Hon. Michael R. Pompeo နှင့် ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Ri Yong Ho တို့နှင့်လည်း သီးခြားစီ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။